Jijin Badbaadinta & Warshadda Paracord - Shiinaha Badbaadinta Jijin & Soo -saareyaasha Paracord iyo alaab -qeybiyeyaasha
Miyaad daawatay “badbaadada duurjoogta”? Barnaamijkan, xiddigga caanka ah wuxuu xirtaa jijimooyin badbaado & isku duubnaan. Waa halkii qalab badbaado oo muhiim u ah duurka. Jijimmada badbaadada ayaa ah mid muti-shaqeyneysa, oo ay ku jiraan aalado badan oo la taaban karo sida mindi, xeerar, jillaab carabiner, jajab, barometer iwm. Middiyuhu waxay ka caawisaa afaynta laamaha markay baahidu ka jirto duurka. Paracords waa lama huraan markaad fuusho duurka. Jawiga duurjoogta ayaa aad muhiim u ah, kuwani way ku caawin karaan, laga yaabee inaad badbaadiso noloshaada. In kasta oo la adeegsanayo duurjoogta, kuwani waxay noqon karaan aaladda badbaadada nolol maalmeedka si looga hortago in ay waxyeeleeyaan kuwa ku xadgudba sharciga. Caaryadu waa lacag la'aan haddii aad doorato nashqadahayaga jira, 350/480/550 Paracord iyo suunka caagga ah. Waxay ku dari kartaa leesarka astaanta ee ku xardhan suunka caagga ah ama waxay ku dari kartaa sumadda astaanta. Cabbirka caadiga ah waa 205 (L)*22 (W) mm ee jijimadda. Ama haddii macaamiishu doorbidaan cabbirka la habeeyay, waa la soo dhaweynayaa. Markaad nala shaqeyso, waxaad noqon doontaa mid cajiib ah dhinacyada naqshadeynta, tayada, waqtiga dhalmada, iyo adeegga iibka kadib ugu fiican.
Jijimooyin badbaado iyo isbarbaryaac